Home Ulo oru Europe Moussa Sissoko Child Story Plus Ihe Ntughari Ihe Odighi
LB na-egosi Full Story of a Football Genius kasị mma mara aha "DIY". Anyị Moussa Sissoko Child Akụkọ ọzọ na-enweghị akwụkwọ akụkọ eziokwu Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site na nwata ruo n'oge. Nyocha a na-agụnye akụkọ ndụ ya tupu ama ama, ndabere ezinụlọ, mmekọrịta mmekọrịta, na ọtụtụ ndị ọzọ OFF-Pitch facts (amaghị) banyere ya.
Ee, onye ọ bụla maara na ọ bụ onye na-eme egwuregwu nke ọma ma ọ bụ naanị mmadụ ole na ole tụlee Moussa Sissoko's Bio nke bụ ihe na-adọrọ mmasị. Ugbu a n'atụbeghị ọganihu, ka anyị malite.
Moussa Sissoko Ụmụaka Akụkọ Plus Nkọwapụta Ihe Echiche Eziokwu-Mbụ na Ndụ Ezinụlọ
Moussa Sissoko mụrụ na 16th nke August, 1989 na Le Blanc-Mesnil, France. A mụrụ ya na ndị nne na nna nke ndị Malian bụ ndị a na-amaghị nke ọma. Sissoko nne bụ nwunye ụlọ mgbe nna ya rụrụ ọrụ dịka onye na-ewu ụlọ n'oge ọ mụrụ.
A mụrụ Sissoko dị ka ọkpara nke ụmụ anọ, ya na ụmụnne nwanyị atọ ndị tọrọ. Na-eto eto na Le Blanc-Mesnil na-eto eto Sissoko nọ na-arụsi ọrụ ike n'ịgba bọl na agụụ na-egosi na egwuregwu ahụ ga-enwe ezigbo ngwaahịa maka ọdịnihu. N'okwu ya;
"Enwere m ngwa ngwa na football pụrụ iduga m inwe ndụ ka mma".
N'ịbụ onye nwere okwukwe na nkwenkwe ya nke nne na nna ya na-akọrọ, Young Sissoko nọ n'ọnọdụ ya ịmalite ịmalite ọrụ na football dịka e debanyere aha ya n'otu ụlọ ọrụ ntorobịa, Esperance Aulnay mgbe ọ dị nanị isii. Esperance Aulnay bụ ụlọ ọrụ ntorobịa nke dị na nso Aulnay-sous-Bois, bụ ógbè dị n'ebe ugwu ọwụwa anyanwụ Paris.
Moussa Sissoko Ụmụaka Akụkọ Plus Nkọwapụta Ihe Echiche Eziokwu-Ụlọ Ọrụ Na-arụ ọrụ
Sissoko mere afọ atọ nke ndụ ya na Esperance Aulnay ebe ọ na-egwuri egwu na agụụ na-akpali mmasị na-akpali onwe ya nke ụbọchị dị mma n'ọdịnihu. N'oge ahụ, ọ zụrụ azụ ugboro atọ n'izu na ụlọ ọgbakọ n'okpuru nlekọta nke onye nkụzi Adama Dieye, bụ onye na-eje ozi ugbu a dị ka onye na-ede akwụkwọ maka ụlọ ọrụ ahụ futsal otu. Sissoko na-akọwa Dieye dị ka onye nduzi dị mkpa na mmepe ya;
"M nọ ebe a taa n'ihi ya"
Ọrụ ntorobịa ya na-enwe ọganihu na-aga n'ihu mgbe o sonyeere Red Star Paris na stint oge. Ọ bụ na Red Star na Sissoko rụrụ ọrụ ndị dị egwu nke mere ka ọ gaa Toulouse ebe ọ na-ahụ ụzọ ndụ ọma nke football nwere maka ya.
N'ịbụ onye ji mkpebi siri ike nke igwu egwu ọ bụla n'ime egwuregwu ọ bụla, Sissoko bụghị nanị na ọ na-adọrọ mmasị ndị na-elekọta ya n'ọtụtụ dị iche iche ma na-ebili n'akụkụ ụlọ ọrụ ahụ.
Moussa Sissoko Ụmụaka Akụkọ Plus Nkọwapụta Ihe Echiche Eziokwu-Bilie Iji Mara Aha
Ọ bụ na Toulouse na Sissoko mere nhazi mbụ nke Njikọ ya na 2007. O mere ihe dị ukwuu iji tọọ egwu, a kpọkwara ya n'oge na-esote. Nweghachi oku na-enweta ya ọtụtụ nhọpụta aha n'etiti ndị ọzọ ohere tinyere qualification na-egwu na UEFA Europa Njikọ.
N'oge na-adịghị anya tupu mmasị Tottenham Hotspur n'afọ 2009, yana ihe ndị ọzọ na-esote Manchester City, Inter Milan, Juventus na ndị dike Giants Bayern Munich, mere ka ọ bụrụ onye a ma ama n'èzí french football. Ọ bụ ezie na ọ bụghị mgbe ọ bụla nkwarụ ka ụlọ ọrụ ya na-aga, Sissoko mesịrị hapụ Newcastle n'afọ 2013.
Na 31 August 2016, Sissoko bịanyere aka na ya Tottenham Hotspur na afo ise, maka £ 30 nde. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme.
Moussa Sissoko Ụmụaka Akụkọ Plus Nkọwapụta Ihe Echiche Eziokwu-Ndụ mmekọrịta
Moussa Sissoko bụ otu n'ime ọtụtụ ndị na-agba ụkwụ na-ahụ n'anya na-edebe ndụ ha onwe ha na nzuzo, pụọ na ndị na-egwu egwu nke ndị ọrụ mgbasaozi na ndị nta akụkọ. Otú ọ dị, ọ dịghị ihe ọ bụla ọ na-agọnahụ na o nwere obi ọ na-amaghị nke ọma.
Sissoko emeela otu obere enyi nwanyị ma ọ bụ enyi nwanyị nwanyị mara mma French nke a maara dị ka Marylou Sidibe (na-enweghị njikọ Djibril Sidibe). Ndị duo na-alụbeghị di na nwunye gbalịsiri ike ka ha ghara ịdaba na radar ọha. A naghị ahụkarị ha mgbe ha na-apụ apụ ma hapụ naanị foto ndị na-eme ka ha nwee obi ụtọ n'oge ha na-agba ọsọ na ụgbọala dị iche iche.
Ka o sina dị, Moussa Sissoko nwere nwa nwoke 6 (n'oge a na post) aha ya bụ Kai.
A maghị banyere nne Nne bụ onye a hụrụ mgbe ọ na-amụrụ nwa ya nwoke tupu ya amalite egwuregwu n'etiti Newcastle na Manchester na April 2016.
Sissoko nwere ihe ndị a iji kwuo banyere mmekọrịta ya na nwa ya:
"Nwa m nwoke meela agadi iji ghọta ọrụ m, mgbe ọ hụrụ m na ámá egwuregwu, na TV ma ọ bụ na mgbasaozi, ọ na - agba ume (na - amụmụ ọnụ ọchị) .Ọ dị mpako ọbụna na - etara ndị ụmụ klas ya ọnụ mgbe ọ na - aga akwụkwọ ekwu na nna ya na-egwu egwuregwu France na Newcastle ".
Dị ka a hụrụ na mbụ, nwa Moussa Sissoko na Rafa Benitez yiri ka ha nwere mmekọrịta chiri anya dị ka a hụrụ na foto dị n'okpuru ebe a.
Kedu ọtụtụ ndị ga - akpọ "a tactic"Egwuru egwu Rafa egbochighị Sissoko ịhapụ ụlọ ọgbakọ maka Tottenham na 2013.
Moussa Sissoko Ụmụaka Akụkọ Plus Nkọwapụta Ihe Echiche Eziokwu-Egwú na egwu egwu
Sissoko egosila na ndụ nke ndị na-agba ọsọ adịghị adagharị n'egwuregwu football. E gosipụtara nke a site na ịhụnanya ya maka ndị na-atọ ọchị, karịsịa "Superman"Na"Spiderman"Nke DC na Marvel comics kwa.
Ọ naghị agwụ n'ebe ahụ, ọ na-ahụkwa egwú French; Zaz, na nwere ihe maka comical ọrụ na-egwuri site American omee omee Jim Carey na fim dị ka "Bruce Pụrụ Ime Ihe Nile" yana "Dumb na Dumber". Ònye nwere ike iche Moussa na Sissoko, ọ bụ ezie na ọ na-egbuke egbuke na ọ ga-enwe obi nwa ewu na utọ maka egwu dị mma?
Moussa Sissoko Ụmụaka Akụkọ Plus Nkọwapụta Ihe Echiche Eziokwu-Ndụ nke Onye
N'ihe banyere ụdị Moussa Sissoko, ọ na-ekwu otu oge;
"M na-abụkarị onye nwere uche, nke e debere ma na-akwanyere m ùgwù. Nke a anaghị egbochi m ikwu okwu ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
N'agbanyeghị ọrụ ọkachamara dịka onye ọkpụkpọ mba, Moussa anaghị eche na ndị ọzọ ka elu. Ọ dị ka a nnunu ulo onye na-apụ apụ ma na-ekiri ihe nkiri, na-egwuri egwu na nwa ya ma na-ahụ ndị enyi ma ọ bụ ezinụlọ.
N'oge ahụ, n'ógbè ya (Aulnay-sous-Bois), Moussa fọrọ nke nta ka ọ bụrụ aha nickname niile. Dị ka o kwesịrị, ọ hụrụ tinker n'anya mgbe ọ bụ nwata. Nke a wetara ya aha aha "N'onwe Gị".
"Ọ mara mma na ndị mmadụ ka na-akpọ m na. Ana m ewere ya nke ọma. Ọ na-echetara m obere nrọ anyị. Ọ dị mma mgbe niile ịhụ ndị enyi na echefula ebe ị si bịa. Taa, ana m eme obere 'DIY'. Enweghị m oge zuru ezu, m na-ahọrọ ịzụta ugbua a na-akpọkọta ngwá ụlọ, ọ dị mfe. "
Moussa Sissoko Ụmụaka Akụkọ Plus Nkọwapụta Ihe Echiche Eziokwu-0ther Mmasị
Sissoko nwere mmasị igwu egwuregwu vidio na igwu. Ọ hụrụ ụgbọala nke ọma, Audis, Range Rovers, BMWs na Mercs nke na-achọ ụlọ ahịa ya.
Moussa Sissoko Ụmụaka Akụkọ Plus Nkọwapụta Ihe Echiche Eziokwu-Nduzi ndi ndu
E weere Sissoko dị ka onyeisi onye ndú nke Newcastle Coach, Neil Cameron. Nke a dugara onye nchịkwa ka ọ nye Sissoko onye isi ụgbọ mmiri mgbe ọ na-esote ya Fabricio Coloccini enwere ihe mgbagha kpatara mmerụ ahụ.
Sissoko, bụ onye na-arụ ọrụ nke abụọ na Newcastle, nwere ọrụ ijuanya na ọ bụghị mgbe ọ kwụsịrị ntụkwasị obi nke onye nkụzi ya ka o ji nlezianya duru ndị otu ya aka inweta isi ihe dị mkpa site na mmempụ megide ụfọdụ n'ime ìgwè egwuregwu nke Bekee. Otú ọ dị, isi ihe ndị ahụ ezughị oke iji gbochie Newcastle ịdaba n'oge ahụ.
Moussa Sissoko Ụmụaka Akụkọ Plus Nkọwapụta Ihe Echiche Eziokwu-O yiri ka o siri ike
Sissoko abụghị ihe eji chaa chaa ọcha Ryan Giggs na Andres Iniesta bụ. Sissoko weere òkè ya nke ọma ma bụrụ kaadị edo edo ọtụtụ ugboro. O nwetara klas ya mbụ na ya na UEFA Champions League nke mbụ megide Liverpool na August 15 mgbe ọ bịarutere maka ikpeazụ 7 nkeji egwuregwu ahụ.
N'ọnwa Disemba 2013, Sissoko nwere mbụ nkuzi ya na English Football Association na-eti mkpu onye nlekota Mike Jones na ihu.
Otú ọ dị, a na-eme nke a dịka 'mberede', dị ka ọ bụ naanị mere mgbe ọ na-agbalị iji kwalie site na Southampton na-eche nche.
Moussa Sissoko Ụmụaka Akụkọ Plus Nkọwapụta Ihe Echiche Eziokwu-Chef Sissoko
Ọ dị onye ọ bụla na-eche na ndị na-agba ụkwụ na ndụ na kichin?
Ọ dị mma, Moussa Sissoko bụ otu n'ime kpakpando Tottenham, bụ ndị e gosipụtara na Healthy Living With AIA & Hotspur TV show.
Na ngosi, Moussa Sissoko na Hugo Lloris onye na-ewu ewu bụ onye na-ahụ maka nri bụ Jeremy Pang na Spurs nutritionist- Hannah Sheridan dị ka ndị egwuregwu abụọ ahụ na-anwale ha kachasị mma iji sie nri Prawn Fried Rice na Thai Green Curry.
Kedu ihe na-atọ ụtọ, Ọ dịghị onye maara, ma ọ dị oke anya. E wezụga nkà ya, Moussa Sissoko na-ahụ ntụziaka French na Italian dishes. Maka nri ngwa ngwa, ọ na-atọ ụtọ pepperoni pizza.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ Moussa Sissoko Ụmụaka Akụkọ na akụkọ eziokwu ndị dị oke ọnụ. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịdị mma. Ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya na isiokwu a, biko tinye okwu gị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị !.
Clement Lenglet Akụkọ Nwatakịrị Nkọwa Eziokwu Akụkọ Untold Biography
Ulo oru Europe350